Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Wayaanaha oo Muwaadin Ku Dhibaateeyay Degmada Farmadow.
Ciidanka Wayaanaha oo Muwaadin Ku Dhibaateeyay Degmada Farmadow.
Posted by Dulmane	/ February 18, 2016
Wararka naga soo gaadhaya wadanka ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya inay ciidanka wayaanahu si waxshinimo leh ula dhaqmeen muwaadin u dhashay wadanka Ogadenia oo lagu magacaabo Anas Xaaji Yuusuf.
Muwaadinkan ayay ciidanka gumaysigu markay taariikhdu ahayd 16/2/2016 kala baxeen gurigiisa oo ku yaala Tuulada Farmadow oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan. Waxayna ku eedeeyeen inuu hayo hub aad ubadan ooy lahaayeen ururkii Al-Itixaad ee isdhibay waxayna ku sheegeen inuu yahay ninka uqaabilsan dhinaca saanada milatariga ee ururkaas.
Anas oo lasheegay inuu kooxdaas taageere u ahaan jiray intaysan xaroonin, ayay ciidanka gumaysigu ugaysteen jidh-dil iyo bahdil aad ubadan kahor inta ayna xabsiga dhigin. Dhibkii loo gaystay awgii waxay kadhigeen muwaadinkan qof geeri iyo nolol u dhaxeeya.
Ciidanka wayaanaha ayaa shakhsigan u xabisan ku eedeeyay inuu gacanta kuhayo Qoryo, rasaas, miinooyin iyo dirays aad ubadan iyagoo ku andacooday inay ciidankii horay isusoo dhiibay ee Al-Itixaad kujiraan dib isu habayn waxayna ku sheegeen inay Anas u xil saareen inuu diyaariyo qalabkii lagu dagaal gali lahaa, waa sida hadalka loo dhigaye.
Sikastaba ha ahaatee ciidamada gumaysiga Itoobiya ee kusugan Ogadenia ayaa dadka shacabka ah ee wadanka ku dhaqan usameeya wadooyin badan ooy dhiigooda ku xalaashanayaan.